Momba anay | Zhejiang Safemate Automotive Security & Emergency Technology Co., Ltd.
Zhejiang Safemate Automotive Security & Emergency Technology Co ,. Ltd. dia orinasa matihanina manokana amin'ny vokatra vonjy taitra fiara, manana traikefa 20 taona mahery. Fanadihadiana ara-barotra matihanina, fahaiza-manao matanjaka sy famolavolana namboarina mitazona antsika ho mpanamboatra lehibe amin'ny asa vonjy taitra fiara manerantany.
Ny vokatray rehetra dia natao ho an'ny fampiasana vonjy maika ary manarona ny toe-javatra rehetra eny an-dalana, ny vokatra dia misy tariby booster, charger batterie, starter jumpe, kit vonjy taitra, tady fitehirizana ary entana hafa maika. Tsy maninona ny famerenana amoron-dalana, ny lasy an-kalamanjana, ny fanarenana batterie, na ny toe-javatra maika amin'ny ririnina, izahay no vahaolana feno amin'ny olan'ny vonjy maika.
Amin'ny maha-orinasa manerantany antsika, ny fiarovana sy ny kalitao no soatoavinay. Ny orinasanay lasa ISO90001, ISO14001 tamin'ny antoko fahatelo. Ary ny vokatray dia miaraka amin'ny fanamarinana rehetra miaraka amin'ny mpanjifa satify avy amin'ny tsena isan-karazany, toa ny GS, CE, ROHS, REACH, UL. Ekipa R&D manam-pahaizana sy za-draharaha no manosika ny vokatray ho an'ny ambaratonga avo lenta.
Handroso hatrany i SAFEMATE amin'ireo mpanjifantsika sarobidy ary manantena ny hanome ny serivisinay ho anao indrindra.